China welded waya ntupu factory na suppliers | Ansheng
Welded waya ntupu ka nke elu-edu ala-carbon ígwè waya, esichara site akpaka nkenke na ezi n'ibu akụrụngwa ịgbado ọkụ, na mgbe ahụ electro kpaliri ọkụ-tinye galvanized, ịkwanyere na ndị ọzọ na elu ọgwụgwọ maka passivation na plasticization.
Ihe: Obere waya waya carbon, igwe anaghị agba nchara, wdg.
Ụdị: kpaliri welded waya ntupu, ịkwanyere welded waya ntupu, welded ntupu panel, igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu, wdg
Akpa ákwà na e ji mara: kpaliri tupu ịkpa ákwà, kpaliri mgbe ịkwa ákwà. O nwere njirimara nke mgbochi mmekpa ahụ, igbochi oxidation, mgbochi anyanwụ, nguzogide ihu igwe, usoro siri ike, mmepụta ngwa ngwa, ọmarịcha ma dị mma, na njem dị mfe.
Ngwa: E nwere ọtụtụ ụdị welded waya ntupu, nke na ọtụtụ-eji.
1. Enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ, njem ugbo na ngwaahịa mmiri metụtara ya, aquaculture, wdg.
2. Enwere ike iji ya dị ka ngere ifuru, ngere wara wara, yana ụlọ ọrụ ụlọ na ịchọ mma.
3. The ewu ụlọ ọrụ n'ozuzu na-eji welded waya ntupu maka mpụga mgbidi mkpuchi na mkwado.
4. Weld welded waya ntupu nwere ike iji na ụlọ ahịa malls, ụlọ ahịa shelves, exhibits, wdg
Mbukota: n'ozuzu mmiri na-àmà akwụkwọ (agba bụ ukwuu n'ime anya-acha ọcha, odo, plus ụghalaahia, akwụkwọ, wdg), 0.3-0.6mm anụ ụlọ obere waya dayameta welded waya ntupu, n'ihi na waya dịtụ nro, gbakwunyere na ọ bụ obere mpịakọta, ahịa na-arịọkarị Bundled na bagged iji gbochie ọkọ mere site mbupu.
Nke gara aga: Gbasaa Metal waya ntupu
Osote: Epoxy ntekwasa waya ntupu
Ngwunye ígwè gbasaa bụ ihe mpempe akwụkwọ nke e guzobere site na ntanye igwe gbasaa na igwe na-akpacha ajị iji mepụta ntupu. Ihe: Aluminom efere, obere carbon steel efere, igwe anaghị agba nchara efere, nickel efere, ọla kọpa efere, aluminum magnesium alloy efere, wdg etc.kpa ákwà na e ji mara: Ọ na-mere site zọ na ịgbatị nke ígwè efere. Igwe ntupu nwere njirimara nke sturdiness, nchara nchara, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide, na ezigbo mmetụta ventilashion. Dị: Kwekọ ...
Galvanized abụghị igwe ma ọ bụ alloy; ọ bụ usoro nke etinyere mkpuchi zinc na nchara iji gbochie nchara. Na ụlọ ọrụ waya ntupu, Otú ọ dị, a na-emeso ya dị ka ụdị dị iche iche n'ihi na ọ na-agbasawanye iji ya na ụdị ngwa niile. Enwekwara ike iji waya waya mee ihe mkpuchi zinc. N'ikwu okwu n'ozuzu, nhọrọ a dị oke ọnụ, ọ na-enye ọkwa dị elu nke nkwụsị corrosion. Ọ bụ ...
Igwe anaghị agba nchara kpara waya ntupu ka si igwe anaghị ata nchara. Igwe anaghị agba nchara waya na-eyi-eguzogide, okpomọkụ-eguzogide, acid-eguzogide na corrosion eguzogide. dị iche iche akara ule nke igwe anaghị agba nchara na-eji waya ntupu. a na-eji ihe dị iche iche eme ihe na ngwa a kapịrị ọnụ iji jiri ihe pụrụ iche. Anyị na-emepụta ntupu waya n'ụdị dị iche iche. A na-ekpebi ákwà ahụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ, dị ka ihe onwunwe, eriri waya, nha ntupu, obosara na lengt ...